ती दिन सम्झदा आङ अझै पनि सिरिङग हुन्छ « Ramechhap News
ती दिन सम्झदा आङ अझै पनि सिरिङग हुन्छ
प्रिय साथीहरु !!
म सारीरिक रुपले विक्षिप्त भएपनि मानसिक रुपले कुसल छु र तपाईहरुमा पनि कुशलताको हार्दिक आसा राख्दछु !
जब म स्पाइनल इन्जुरी पुनर्स्थापना केन्द्र जोरपाटीको बसाई पछि २०६४ असोजमा घर फर्किए त्यसपछि मलाई के के भयो, मैले के के गरे, के के गरिन ती सब लेख्न असमर्थ छु कारण ती सम्झदानै मेरो मन सिरिङ्ग हुन्छ ! बिस्तारै मैले आफुलाई कुहिरोमा हराएको काग जस्तै भेटाए ! सानो बालक हुदा ठुलो भएर धेरै धन र मान कमाउने ईक्षा थियो ! ती घुन्द्रुक र ढिडो खादै ढाकर र स्याउलाको भारी बोकेर पहाडको बाटो ” खुईय ” गर्दै उकालो ओरालो गरेको सम्झन्छु अनि पछि काठमाडौँको पाचतारे होटलमा ज्युनार गर्दै कार लिएर हिडेको सम्झन्छु तर संसारमा मान, इज्जत, धन, दौलत हात परे पनि आखिर मानिश जन्मेको त मर्नलाई नै रहेछ ? आखिर एक दिन त ………………..? त्यतिखेर मैले तपाईहरुलाई भनेको पनि थिए जति सुकै बाचे पनि एक दिन त मर्नुनै पर्ने हो भने यो संसारमा दुख कस्ट भोग्दै किन बचिरहनु ? तपाईहरु पनि त्यतिखेर निरुत्तर भएको थियौ हैन र ?
तर साथीहरु !!
अचेल म बदलिएको छु ! हामीले परिबर्तनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने रहेछ ! यो नकार्न नसकिने कुरा हो , संसारलाई यति रमाइलो र सुबिधाजनक बनाएको पनि परिबर्तन ले नै हो ! हामीलाई थाहै छ एक दिन त हामी सबैले यो धर्तिबाट बिदा लिनु पर्दछ तर पनि हामी मृत्यु देखि दरै रहेका छौ ! हामी ठान्छौ हाम्रो सन्तति वा जीवन साथी हामी बिना बाच्न सक्दैनन् तर सत्य केहो भने उनीहरु मध्ये कोहि पनि तपाई संगै मर्नेवाला छैनन् ! तपाइको अवसानले केहि दिन उनीहरुलाई निरास तुल्याउन
सक्छ तर उनीहरु मरिहाल्दैनन ! समयले तिनीहरुलाई निरासाबाट मुक्ति दिन्छ अन्तत उनीहरु निरासाबाट आफ्नो गन्तभ्य पथमा अघि बद्छन !
दुनिया कुनै पनि यस्तो छैन जसले सम्पूर्ण इच्छा पुरा गर्न सकोस वा जसले मन ले जे चिताए पनि सुख प्राप्त गर्न सकोस ! सुख दुख पाउनु भनेको समयको अधिनमा छ ! व्यक्तिको अधिनमा होइन ! यस संसारमा जन्मलाई मृत्युले जवानीलाई बुढाले सन्तोषलाई असन्तोषले निरोगिलाई रोगले ग्रस्त गरेको छ मानिसका स्वास्थ्यलाई आनेकौ रोग र पीडाले दुखः दिन्छ ! यो हाम्रो सरिर पनि अनित्य छ धन पनि स्थिर छैन मृत्यु सधै नजिकै छ ! हामीले बितिसकेको बस्तु र कुराहरुको सोच गर्नु हुदैन ! भबिस्यमा कस्तो आइपर्छ वा के होला भन्ने चिन्ता पनि लिनु हुदैन ! हामीले जुन समयमा जस्तो समस्या आइपर्छ तेस्तै बेहोर्नु पर्दछ ! वर्तमान र समय अनुसार चल्न सिक्नु पर्दछ ! जे चिज आफ्नो बसमा हुदैन तेसका लागि दुखि नभई सन्तोष लिनु पर्दछ ! मानिसले इच्क्षा गर्यो , चाहना राख्यो, संकल्प गर्यो भने संसारमा असम्भब भन्ने कुरा कुनै छैन ! अरुलाई नियन्त्रण गर्न पक्कै गार्हो हुन्छ तर आफुलाई नियन्त्रण गर्न कुनै मुस्किल हुदैन ! दृढतामा सफलता हुन्छ , शक्तिसाली सोचमा सफलता हुन्छ !
त्यसकारण अघाडी बढ्ने प्रयास गर्नुहोस !!
अन्तमा साथीहरु !!
आफुलाई यति दह्रो बनाउनुसहोस् कि कुनैपनि कुराले तपाइको सान्तिलाई नबिथलोस, जो संग भेट्दापनि स्वस्थ , सुख र सम्पन्नताको कुरा मात्र गर्नुहोस ! आफ्नो साथीलाई तपाई उनीहरुको खुबीको मात्र प्रसंसा गर्नुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस् ! प्रत्यक बस्तुको उज्यालो पक्षलाई मात्र हेर्नुहोस ! राम्रो मात्रै सोच्नुहोस ! राम्रोको लागि मात्रै काम गर्नुहोस र राम्रोको आसा राख्नुहोस ! अरुको सफलतामा उतिकै उत्साही बन्नुहोस तपाई आफ्नोमा बन्ने गर्नुहुन्छ ! बितेको बिगत र गल्तीहरुलाई विर्सनुहोस र भबिस्यका सुन्दर प्रप्तिहरुमा यौटै ध्यान लगाउनुहोस ! सबै संग हसिलो मुस्कान बाड्नुहोस ! राम्रोको लागि यति समय खर्चानुहोस कि चिन्ताले नसतोस , यति उदार बन्नुहोस कि रिस नआवस !!
सुकाजोर-१,रामेछाप रजयछाप !!